Gemstone Verdelite waa dalxiis cagaaran - fiidiyoow
Gemstone Verdelite waa dalxiis cagaaran. Waxaan ku sameysannaa dahab la isku qurxiyo oo leh dhagxaanta dhagaxa ah ee loo yaqaan 'verdelite' Macnaha Verdelite
Ka iibso verdelite dabiici dukaankayaga
Waa noocyo kaladuwan oo loo yaqaan 'tourmaline' gaar ahaan cagaaran, mararka qaar haddii kale loo arko inuu yahay dalxiis cagaaran ganacsiga. Midabkeedu wuxuu u dhexeeyaa koronto dhalaalaya ilaa cagaar khafiif ah oo jilicsan taasoo ka dhigaysa mid si aad ah loogu raadinayo dhagaxa qoyska midabka dhagaxa ah
Macdanta macdanta ah ee loo yaqaan 'crystalline boron silicate mineral' oo lagu daro walxaha sida aluminium, bir, magnesium, sodium, lithium, ama potassium. Waxaa loo kala saaraa sida dhagax qaali ah oo qaali ah.
Tourmaline cagaaran waa wareegga wareegga wareegga ee lix xubnood oo leh nidaam muraayadaha trigonal. Waxay u dhacdaa sida dheer, caato ah oo qaro weyn leh oo loo yaqaan 'kiristaalo' iyo 'columnar' kuwaas oo badiyaa saddex-geesood ah qaybta iskutallaabta, badiyaa leh wejiyo qaloocsan. Qaabka joojinta dhamaadka darafyada ayaa mararka qaarkood asymmetrical ah, oo loo yaqaan hemimorphism. Kiristaalo yaryar oo caato ah ayaa caan ku ah granite ganaax wanaagsan oo loo yaqaan aplite, inta badanna waxay sameysmaan qaabab muuqaal u eg. 'Verdelite tourmaline' waxaa lagu kala soocaa xaggeeda seddex geesood ah. Ma jiro macdan kale oo wadaag ah oo leh saddex dhinac. Wajiyadda Prisms waxay inta badan leeyihiin fallaadho toosan oo culus oo soo saara saamayn saddex-xagal wareegsan. Tourmaline cagaaran ayaa si dhif ah u ah euhedral.
Waa jawharad in la siiyo awood fulineed, awood sii socota, awood maskaxeed oo lagama maarmaan u ah xaqiijinta waxa ugu fiican. Waxay soo jiidan doontaa hanti, jacayl iyo caafimaad oo mulkiiluhu doonayo. Dhagaxu wuxuu gacan ka geysan doonaa hormarinta wadada nasiib wanaag si xoog leh. Waa dhagaxa weyn in loo beddelo laga jaro oo lagu daro. Waxay abuuri doontaa silsilad nasiib wacan. Gemstone sidoo kale wuxuu ku siinayaa fursad aad kaga hortagto waxyaabaha cusub. Waxaad fursad u heli doontaa inaad ka gudubto caqabadaha xadka. Waxay kaa horjoogsaneysaa inaad ku qanacdo xaaladda hadda jirta. Waa dhagax aad u ballaadhan oo ballaadhinaya suurtagalnimada mustaqbalka.
Soo iibso verdelite dabiici ah dukaankeenna qaaliga ah
Waxaan ku sameysannaa dahab la isku qurxiyo oo leh dhagxaanta dhagaxa ah ee loo yaqaan 'verdelite'
Maxaa loo isticmaalaa verdelite?
Green Tourmaline waxay kufiican tahay ujeedooyinka bogsashada, maadaama ay diirada saari karto tamarta bogsiinta, nadiifinta aura, iyo ka saarida xannibaadaha. Green Tourmaline waxaa badanaa loo isticmaalaa furitaanka iyo dhaqaajinta Wadnaha chakra, iyo sidoo kale siinta dareen nabadeed iyo degganaan wadnaha iyo nidaamka dareenka.
Halkee laga iibsadaa verdelite?
Waan iibineynaa Verdelite dukaankeenna
Verdelite ma dhif baa?
Meelaha ugu waaweyn ee lagu keydiyo dalxiiska cagaaran waxay ku yaalliin Brazil, Namibia, Nigeria, Mozambique, Pakistan iyo Afghanistan. Laakiin dalxiisyada cagaaran ee midab wanaagsan iyo daahfurnaanta ayaa ah wax dhif ku ah macdanta dhagaxa. Hadana, marka lagu daro, iyaguna way ka madhan yihiin ka-mid-noqosho, runtii aad baa loo hungoobay.
Miyuu verdelite qiimo leeyahay?
Tourmaline cagaaran ayaa ah midka ugu qaalisan marka uu buluug ku jiro ama u muuqdo mid u eg sumurud sida chrome tourmaline.
Bisadda indhaha bisadda